Global Voices teny Malagasy » Mpanakanto Rosiana Mamantsika Ny Vihiny Teo Amin’ny Kianja Mena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Novambra 2013 4:03 GMT 1	 · Mpanoratra Kevin Rothrock Nandika Nancy
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Hehy, Hevitra, Mediam-bahoaka, Politika, Zavakanto & Kolontsaina, Akon'ny RuNet
Iray amin'ireo Rosiana mpanakanto fanta-daza ary tena mahabe resaka amin'ny fomba fanehoany hevitra no sady mafana fo amin'ny lafiny politika i Petr Pavlensky . Rehefa mitantara ireo karazana fampirantiana ataony dia matetika ilaina ny mampiasa ny teny hoe “ara-bakiteny” mba hanindriana fa inian'ity lehilahy ity atao ny mandratra tena ara-bakiteny ho an'ny kanto ataony. Hatramin'ny roa andro lasa izay, ny asa malaza nataony dia ny fanjairana ny molony hikatona tamin'ny kofehy tamin'ny Jolay 2012 (ho fanehoany ny fanoherany ny fanenjehana ny Pussy Riot ho nanao heloka bevava), sy ny fifonosany niboridana tao anatinà fefy tariby mandratra na barbelé teo ivelan'ny trano fivorian'ny antenimieran'ny tanàna tao Saint Petersburg ( ho fanoherana ny hevitr'ireo mpanao lalàna mpifikitra amin'ny nentim-paharazana) ny volana May 2013 . Ny 10 Novambra 2013, dia nampian'i Pavlensky zava-dehibe fanintelony ny tantaram-piainany : nipetraka niboridana teo amin'ny làlam-be voarary vato manoloana ny fasan'i Lénine eo amin'ny Kianja Mena izy ary nofantsihany teo ny fonom-bihiny, mba hiraiketany amin'ny rarivaton'ny làlana.
Nazavain'i Pavlensky tao amin'ny fanambarana  iray fa marika io hanehoana ny ” fihetsehan'ny fiaraha-monina Rosiana sy ny tsy firaharahiana ara-politika ary ny fanekena fahatany ny tsy fetezan-javatra.” Nampifangaroin'ny mpitoraka bilaogy Rosiana ny haja sy ny eso ho fanehoan'izy ireo ny heviny.
Ampitahain'i  [ru] Maria Gaidar ny fihetsik'i Pavlensky sy ny fonon'ilay hira malazan'ny lohataona an'ny “Daft Punk” – tarika Polisy Rosiana Mpihira, “Get Lucky” amin'ny fahitàna fa mety hamantsika ny fonom-bihiny amin'ny tany ao amin'ny Kianja Mena iry voalohany, saingy ny ankamaroan'ireo Rosiana an-tapitrisa kosa dia nifantsika tamin'ny fandaharana fialam-boly tsy misy dikany tao amin'ny fahitalavitra toy ny fonon'ny “Get Lucky”.
Araka ny tatitra nataon'ilay mpanoratra Dmitri Olshansky  [ru] sy ilay mpanao gazety Ivan Davydov  [ru], dia nasongadin'i Baranova ihany koa fa tsy nolavahan'i Pavlensky ny fonom-bihiny tamin'izy nipetraka teo amin'ny vato teo ivelan'ny fasan'i Lénin. Ny sasany kosa nilaza fa tsy nisy rà hita tamin'ny hoditr'i Pavlensky, teo amin'ny nidiran'ilay fantsika, ary tsy nampiseho endrika mangirifiry akory izy, rehefa nesorina teo amin'ilay rarivato ary nentin'ny mpitandro filaminana. Araka ny lazain'i Baronova dia efa nolavahan'i Pavlensky am-bolana maro ny fonom-bihiny, ary nampidiriny moramora teo amin'ilay nofo voalavaka ilay fantsika raha vantany vao tafapetraka teo amin'ny Kianja Mena izay ny 10 Novambra.
Tsy mbola fantatra mazava raha toa ka hampangina ny fanohanan'ny vahoaka ny haikanto politikany ny fiomanan'i Pavlensky tamin'ny fonom-bihiny. Fa nandritra izany fotoana izany, nolavin'ny  fitsarana tany Mosko ny fanenjehan'ny mpitandro filaminana azy ho nanao toetran-jiolahimboto, tamin'ny filazana fa nisy hadisoana ny fomba nataon'ireo mpitandro filaminana nisambotra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/11/17/54183/
 nanasongadina : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10200829892054084&id=1367268883
 nanoratra : https://www.facebook.com/vsevolod.chernozub/posts/10151997476211726
 Ampitahain'i : http://m-gaidar.livejournal.com/208216.html
 mampiranty : http://armarium.org/u/2013/11/11/6gc54.gif
 nolavin'ny : http://newsru.com/russia/11nov2013/pavlensky.html